टेकु र वीरमा पनि छैन डेंगु परीक्षण निःशुल्क, राज्यमन्त्रीको निःशुल्क गर्ने निर्देशनमै थियो राजनीति – Health Post Nepal
२०७६ भदौ ३१ गते १०:३३
मुलुकले ४ महिनादेखि डेंगुको महामारी खेपिरहेको छ । डेंगु नियन्त्रणमा सुरुका ३ महिनाको प्रयासमा निराशा हात लागेपछि नियन्त्रणको पाटो सरकारको काबुमा नरहेको तर उपचार भने गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घोषणा गर्यो । देशका ५६ भन्दा बढी जिल्ला डेंगुले आक्रान्त भइरहँदा सरकारको यो लाचारी कत्ति पनि सुहाउँदो थिएन ।
यद्यपि, उपचारमा भने सरकारबाट राहत पाउने आशा जनतामा थियो । सरकारले नियन्त्रण काबुबाहिर गएको घोषणा गरेसँगै राजधानीलगायत आसपासका जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा डेंगुको संक्रमण फैलियो ।
यसैबीच, १७ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले टेकुस्थित शुक्रराज ट्र«पिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको निरीक्षण गरे । मुलुकको एक मात्र केन्द्रीयस्तरको सरुवारोग अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. यादवले डेंगुको परीक्षण तथा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग शुल्क नलिन अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।
जनतालाई लाग्यो, रोग अनियन्त्रित बने पनि संक्रमण भइहालेमा उपचार भने निःशुल्क पाइनेभयो । तर, दुई साता बितिसक्दा पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएन । वास्तवमा मन्त्रीले उक्त निर्देशन मिडियाबाजीका लागि मात्र दिएको खुल्न आएको छ ।
उनले निःशुल्क परीक्षणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, बजेटको पूर्वानुमानसम्म पनि नगरी निःशुल्क घोषणा गरेको देखिन्छ । यसै पनि भित्री रूपमा डा. यादवले पनि डेंगु परीक्षण निःशुल्क गर्न नसकिने अभिव्यक्ति अस्पताललाई दिएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट निःशुल्क परीक्षणका लागि कुनै लिखित निर्देशन नआउनुले पनि डा. यादवको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नभई राजनीतिक दाउपेच मात्र थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सबैजसो निजी अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराएबापत बिरामीले हजारभन्दा माथि नै शुल्क तिर्नुपर्छ । बागबजारस्थित काठमाडौं मोडल हस्पिटलले डेंगु परीक्षण गराएबापत १३४० रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यसैगरी, चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराउनेले २ हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारेको प्रश्नमा अस्पताल प्रशासन विद्यमान बजेटमा निःशुल्क परीक्षण सम्भव नभएको बताउँछ । दैनिक ६ सयभन्दा बढीको परीक्षण हुने र त्यसको व्ययभार अस्पतालले थग्न नसक्ने अस्पतालको भनाइ छ । ‘दैनिकजसो ८ सयभन्दा बढी बिरामी डेंगु परीक्षण गर्न आउँछन्, उनीहरू सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्ने हो भने दैनिक ७–८ लाख खर्च हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खतिवडा भन्छन्, ‘परीक्षण निःशुल्क गर्न थालियो भने अस्पतालको वार्षिक बजेट १ महिनामै सकिन्छ ।’
टेकु र वीरमा परीक्षणशुल्क ५००, निजीमा १३४० देखि २ हजारभन्दा माथि पनि
सरुवारोगविशेषको उपचारका लागि पूर्णतः सरकारी लगानीमा सञ्चालनरत टेकु अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराउने बिरामीले ५०० रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । परीक्षण किटका लागि मात्र अस्पतालको लागत ९५० रूपैयाँ पर्ने अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीलाई सहुलियतपूर्ण दरमा सेवा दिन लागतभन्दा आधा मात्र शुल्क लिएको अस्पतालको भनाइ छ । बिरामीको चाप दिनहुँ चुलिँदै गएपछि सहुलियतका लागि बजेट अभाव हुन थालेको छ । सहुलियतमा सेवा धान्न नसक्ने भएपछि अस्पतालले मन्त्रालयसित १ करोड ३६ लाख रूपैयाँ डेंगु परीक्षणका लागि माग गरेको छ ।
‘दैनिकजसो ८ सयभन्दा बढी बिरामी डेंगु परीक्षण गर्न आउँछन्, सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्ने हो भने दैनिक ७–८ लाख खर्च हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खतिवडा भन्छन्, ‘परीक्षण निःशुल्क गर्न थालियो भने अस्पतालको वार्षिक बजेट १ महिनामै सकिन्छ ।’
त्यसैगरी, मुलुककै सस्तो स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा पनि डेंगु परीक्षण शुल्क ५०० रूपैयाँ नै छ । वीरले पनि बिरामीलाई सहुलियत प्रदान गर्न लागतभन्दा निकै कम रकम मात्र शुल्क लिने गरेको अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बताउँछन् ।
निजी अस्पतालहरूमा भने डेंगु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता छैन । सबैजसो निजी अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराएबापत बिरामीले हजारभन्दा माथि नै शुल्क तिर्नुपर्छ । बागबजारस्थित काठमाडौं मोडल हस्पिटलले डेंगु परीक्षण गराएबापत १३४० रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यसैगरी, चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराउनेले २ हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । डेंगु परीक्षण गराएबापत बिरामीले २ हजारदेखि २ हजार २ सयसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अन्य निजी अस्पतालमा पनि डेंगु परीक्षण शुल्क २ हजारकै आसपासमा रहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव